सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता असफल « Khabarhub
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता असफल
भोलिदेखि कडा आन्दोलन गर्ने केसी पक्षको चेतावनी
काठमाडौं- सरकार र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार राति बसेको वार्ता असफल भएको छ ।
बिहीबार विनानिष्कर्ष टुंगिएको वार्ता शुक्रबार पुन: शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राति ९ बजेदेखि बसे पनि सहमति हुन नसकेको डा केसी तर्फका वार्तामा सहभागी डा जीवन क्षेत्रीले बताए ।
डा केसीले राखेका मागहरु मध्ये २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने विषयमा सरकार पक्षले कुनै सहमति नजनाएपछि वार्ता असफल भएको उनले बताए ।
वार्ता असफल भएपछि डा केसीका तर्फका वार्तामा सहभागी डा जीवन क्षेत्रीले सरकार पक्षले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै म्यान्डेट तयार नगरेको बताए ।
डा क्षेत्रीले सरकारले डा केसीको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवनरक्षा गर्ने विषयमा गम्भिर नभएको भन्दै भोलिदेखि कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने पनि बताए ।
शुक्रबार दिनभर शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारका मुख्य सचिव, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव तथा सरकारी वार्ताटोलीबीच आन्तरिक छलफल भएपछि सरकारले शुक्रबार राती ९ बजे शिक्षा मन्त्रालयमा पुन डा केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको हो ।
यस्तो छ केसी पक्षका वार्ता टोलीले जारी गरेको विज्ञप्ति
के के छन् डा. केसीका माग ?